Fallaqayn ku saabsan siyaasadda Sweden ee sannadkan 2014 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fallaqayn ku saabsan siyaasadda Sweden ee sannadkan 2014. Foto: Jessica Gow
Fallaqayn ku saabsan siyaasadda Sweden ee sannadkan 2014
La daabacay tisdag 23 december 2014 kl 16.27
Waxa aynu ku jirnaa gebogebadii sannadka 2014, iyada oo ay doorasho dhacday sannadkan ayay haddana mar labaad xisbiyada siyaasaddu u sii diyaargaroobayaan doorasho kale oo cusub oo dhici doonta bisha maarso ee sannadka 2015.
Doorashadan cusub oo ah mid mar labaad lagu celinayo ayaa aanay mid jaadkeeda oo kale ahi taariikhda soo marin kontonkii sanno ee ugu danbeeyay. Anders Lindberg oo ah qoraa wax ku qora jarriiradda Aftonbladet ayaa aaminsan in 2014 uu ahaa sannad ay siyaasadda Iswiidhan ahayd mid is laba rogaysay.
- Waxa aynu odhan karnaa waxa uu ahaa sannad ay siyaasadda Iswiidhan ahayd mid is laba rogaysa. Bilowgii sannadka dad badan ayaa la dhacsanaa sida ay wax u socdaan, halka imikana aynu ku jirno jahawareer. Kaasi waxa uu Anders Lindberg oo ah qoraa wax ku qora jarriiradda Aftonbladet.
Ololaha doorashada dalka ee loo yaqaan Supervalåret waxa uu bilaabmay bilowgii sannadka 2014, waxaanay markiiba xisbiyada siyaasaddu bilaabeen ololahoodii doorashada iyo waliba in ay sidoo kale diyaariyaan musharixiintoodii uga qayb galayay doorashada baarlamaanka Yurub. Markii dadka Iswiidhishka ahi ay codkooda dhiibteen dhammaadkii bishii maay waxa ay natiijadii noqotay saddex guulaystay iyo laba guul daraystay. Xisbiga Piratpariet ayaa waayay kaalintisii, halka xisbiga Moderaterna uu hoos u dhacay 5%.
Xisbiga Sverigesdemokraterna ayaa ka mid ahaa xisbiyada taageerada badan helay doorashadan. Xisbiga Miljöpartiet ayaa isna kor u kacay oo galay kaalinta labaad, isaga oo ku xigay xisbiga Socialdemokraterna. Laakiinse sida uu leeyahay Anders Lindberg oo ka tirsan jarriiradda Aftonbladet, waxa xiiso weyn lahayd in xisbiga Feministiskt initiativ uu markii ugu horraysay kaalin ku yeeshay baarlamaanka midowga Yurub.
- Waa xisbi naadi ah. Ma jiro xisbi noociisa oo kale ah oo waayadan danbe ku soo biiray baarlamaanka midowga Yurub. Waxa sidoo kale xusid mudan wakiilkooda Soraya Post oo ahayd haweenay u dhaqdhaqaaqda xuquuqda roomanka, iyo su’aalihii mihiimka ahaa ee arrintaa ku saabsanaa oo kor loo soo qaaday lana gaadhsiiyay heer midowga Yurub ka hadlo.
Kaasi waxa uu ahaa Anders Lindberg oo ah qoraa wax ku qora jarriiradda Aftonbladet.
Markii ay dhammaatay doorashadii baarlamaanka midowga Yurub, waxa durbadiiba la galay dardar cusub iyo in olole xooggan loo galo doorashada baarlamaanka iyo ta golaha deegaanka. Waxyaabaha ugu badan ee lagu ololaynayay waxa ay ahaayeen waxbarashada, aqoonta dhakhaatiirta, sidii shaqo-abuuris loo samayn lahaa iyo waliba siyaasadda soogalootiga.
Rabshadaha ka socda dalka Yukrayn ayaa noqday kuwo saamayn weyn ku yeeshay siyaasadda dalka, markii ugu horraysay tobanaan sanno kadibna waxa ay noqotay in wax layska waydii sidii loo sugi lahaa xuduudaha dalka, iyada oo diirraddu ka leexatay ciidamada iswiidhishka ee hawlgalada ka wada waddamada dibadda.
Xisbiyada cagaar casaanka ee garabka bidix ayaa bilowgii qiyaasta tirakoobka codadka tiro badan ku hoggaaminayay, laakiinse markii doorashada la soo gaadhay ayay taageerada xisbiyadu noqotay mid aad isugu dhaw. Markii ay doorashadu dhacdayna waxa ay natiijaddii noqotay in ay xisbiyada cagaar casaanku helaan 43%, halka xisbiyada isbahaysiga garabka midigna ka heleen 40%. Maaddaama oo xisbiyada cagaar casaanku heleen aqlabiyaddii codadka, waxa raysalwasaare loo doortay Stefen Löfven oo ka tirsan xisbiga Socialdemokraterna. Taasina waxa ay keentay in uu Stefen Löfven dhiso dawladdii ugu horraysay ee ka koobnayd labada xisbi ee Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Kadib guuldaradii doorashada ka soo gaadhay, Fredrik Reinfeldt oo ahaa raysalwasaarihii hore ayaa iska casilay xilkii hoggaamiyanimada xisbiga Moderaterna. Dhawr cisho kadib waxa isna is casilay wasiirkii hore ee maaliyadda Anders Borg. Sakine Madon oo ah qoraa iyo tafatire wax ku qorta jarriiradda Norran ayaa sheegtay in raysalwasaarihii hore ee Fredrik Reinfeldt lagu xusuusan doono hadalkii uu xagaaga sheegay ee ku saabsanaa sidii ay Iswiidhan u noqon lahayd dal furan oo soo dhaweeya dhammaan dadka qaxoontiga ah ee dalalkoodii ka soo qaxay.
- Waxa aan dadka Iswiidhishka ah ka codsanayaa in ay samir u yeeshaan oo ay qalbi furan ku soo dhaweeyaan dadka qaxoontiga ah ee ay dhibaatadu ka soo qixisay dalalkoodii. Waxa ay u soo qaxeen Yurub, waxa ay u soo qaxeen xorriyad iyo in ay nolol helaan. Waxa aan idinka codsanayaa in aad furfurnaan tustaan iyo dulqaad tustaan marka kasta oo ay soo bataan iyo markasta oo ay duruuf adag la kulmaan. Kaasi waxa uu ahaa Fredrik Reinfeldt.
Hadalkani waxa uu noqday mid dad badani jeclaysteen, halka dad badani ay dhaliil u soo jeediyeen. Dad badan ayaa aamisan in uu hadalkani kor u qaaday taageeradii xisbiga Sverigedemokraterna ee ku saabsanayd arrimaha qaxoontiga. Laakiinse Sakine Madon ayaa aaminsan in ay tani ahayd mid uu Reinfeldt dhinac iska taagay, taasi oo saamayn ku yeelaysay garabkiisa iyo xisbiyada kaleba.
- Haddii aad adba siddeed sanno noqon lahayd raysalwasaare, oo aad rabi lahayd, mihiimna kuu ahaan lahayd in aad taariikh ka tagto, waa la fahmi karaa in aad yeeli lahayd sidaa uu yeelay. Waxa uu runtii ahaa nin ku ad adag mabaadiidiisa ku saabsan arrimaha soogalootiga.
Taasi waxa ay ahayd Sakine Madon.
Xisbiga Moderaterna ayaa haweenayda Anna Kinberg Batra u sharaxay in ay noqoto hoggaamiyaha cusub ee xisbiga. Anna Kinberg oo ah horjoogaha xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga M, ayaa lagu wadaa in ay beddeli doonto hoggoomiyihii hore ee Fredrik Reindfeldt. Sakine Madon oo ah qoraa wax ku qorta jarriiradda Aftonbladet ayaa aaminsan in ay hawlo badan oo culculusi u yaallaan Anna Kinberg, waa haddii ay xilka hoggaamiyanimada xisbiga la wareegto 10 bisha Janaayo. Sakine ayaa dhinaca kale sheegtay in ay qabto in ay Anna Kinberg ku dhaqmi doonto uun isla siyaasaddii hoggaamiyihii ka horreeyay.
- Sida ay u dhaqanto iyo waliba siyaasaddeeda soogalootiga iyo isdhexgalka waxa ay raaci doontaa uun dariiqii Fredrik Reinfeldt. Waxa la filayaa in ay wadahadal ka dhex furi doonto xisbiga dhexdiisa. Maxaa yeelay waxa jira dad badan oo ku nool koonfurta Iswiidhan oo aragti ka duwan ka haysta siyaasadda soogalootiga iyo sida loo qaabilayo qaxoontiga. Sidaas daraadeed waxa ay u baahan tahay in ay kulmiso oo ay midayso siyaasadda xisbiga.
Inkasta oo ay dawladdu ku guulaysatay doorashadii, haddana waxa ay durba gashay jahawareer siyaasadeed. Doorashadii baarlamaanka ee midowga Yurub iyo tii baarlamaanka Iswiidhan ba waxa ay taageeradoodii kor u kacday xisbiga Sverigedemokraterna. Waxaanu xisbigana libinlaabay taageerayaashiisii, isaga oo noqday xisbiga saddexaad ee ugu weyn Iswiidhan. Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa awooddiisu noqotay mid saamayn ku yeelata siyaasadda dalka maaddaama kolba dhanka uu raaco uu miisaankoodu badanayo. Taasina waa in ay u codeeyaan go’aankii xisbiyada garabka midig kaga soo horjeesteen miisaaniyaddii dawladda cusub. Go’aankan lagu daadafeeyay miisaaniyadda dawladda ayaa ay Sakine u aragtaa in uu ahaa mid dadka ku noqday u qaadan waa.
- Cidna may filayn in ay tan oo kale dhacayso. Labada garab ee xisbiyada siyaasaddu waxa ay aad uga sinnaayeen siyaasadda soogalootiga. Sidaasi daraadeed ayay dad badani aaminsanaayeen in uu xisbiga SD uu codkiisa hoosta dhigi doono maaddaama oo ay siyaasadaha labada garab ee kale isku dhaw yihiin. Laakiinse taasi may dhicin, waxaanay diideen miisaaniyaddii, taasi oo keentay in la galo jahawareer.
Sidaasi waxa tidhi Sakine Madon oo wax ku qorta jarriiradda Aftonbladet.
Markii ay xisbiyada mucaaradka ahi diideen miisaaniyaddii cusbayd ee dawladda, waxa uu raysalwasaaraha Iswiidhan Stefen Löfven sheegay in doorasho kale la qaban doono, taasi oo dhici doonta 22 bisha maarso ee sannadka 2015.
- Dawladda waxa ay bisha diisambar 29 go’aan ku gaadhi doontaa in doorasho dheeraad ah la qabto. Waxa aanu sidan u samaynaynaa annaga oo kaashanayna qodobka saddexaad ee hannaanka dib u dhiska dawladda. Waxaanu sidan u samaynaynaa si aanu dadka codbixiyayaasha ah u siino fursad ay ugu diyaargaroobaan doorashadan cusub. Ta mihiimka ay tahay in la arkaa waa in aany tani ahayn mid hore ee ay se tahay mid cusub. Codbixiyayaashu waa in ay si fiican ugu diyaargaroobaan.
Kaasi waxa uu ahaa raysalwasaaraha Iswiidhan Stefen Löfven.
Laakiin sidee ayay tani oo kale u dhici kartaa iyada oo dawladdu dhisnayd muddo laba bilood ah? Anders Lindberg oo ka tirsan jarriiradda Aftonbladet ayaa aaminsan in ay jiraan waxyaabo badan oo keenay in ay dhacdo dawladdii cusbayd ee uu soo dhisay Stefen Löfven. Anders waxa uu sheegay in ay taasi ka mid ahayd baaqii uu Stefen Löfven wadashaqaynta ugu gacanta haadiyay xisbiyada midigta, taasi oo keentay in ay iyana diidmo kala hor yimaaddaan intii aanay doorashadu dhicin.
- Waxa aan qabaa in ay jiraan laba shay oo keenay in ay sidani wax u dhacaan. Midi waxa ay ahayd markii uu Stefen Löfven ku baaqay wadahadal uu la yeelan doono xisbiyada isbahaysiga midigta, si ay iskula eegaan sidii ay u wada shaqayn lahaayeen doorashada kadib. Kadibna waatii xisbiyada midigtu si cad maya ugu yidhaahdeen. Sidaa daraadeed waxa la odhan karaa ololihii doorashadu sidii la rabay umuu dhicin. Ta labaadna waxa ay ahayd miisaaniyaddii ay isbahaysiga midigtu si wadajir ah u soo diyaariyeen, taasi oo fursad weyn siisay xisbiga SD sidii uu u ridi lahaa dawladda cusub.
Sidaas waxa yidhi Anders Lindberg oo wax ku qora jarriiradda Aftonbladet.
Marka la qeexayo waxyaabihii keenay in ay dhacdo miisaaniyaddii dawladdu waa mid wajiyo badan leh. Xisbiyada bidixdu waxa ay isbahaysiga midigta ku eedeeyeen in ay iyagu ku giijiyeen, halka xisbiyada midigtuna sheegeen in xisbiyada bidixdu ciyaareen siyaasad laba waji leh, taasi oo ahayd in ay wada-shaqayn ugu baaqeen isbahaysiga garabka midig, haddana ay dhanka kale wadashaqayn la sameeyeen xisbiga Vänsterpartiet.